आन्तरिक उत्पादन बढेपछि भारतबाट विद्युत आयात घट्यो - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
असार ०५, २०७५ 4567 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
जलविद्युतगृहले विद्युत उत्पादन बढाउँदै लगेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय विद्युत आयातको परिमाण घटाएको छ । नियमित भइरहेको वर्षा र हिउँ पग्लिएर खोलामा पानीको सहत बढ्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनाको उत्पादनले माग र आपूर्ति व्यवस्थापन सहज भएपछि आयातित विद्युतको परिमाण घटाइएको हो ।
अहिले दैनिक औसत २ सय ९२ मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको प्राधिकरण भार प्रेषण केन्द्र प्रमुख विष्णु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले हिउँदमा औसत ४ सय मेगावाट विद्युत आयात गरेको थियो । यो वर्ष सुख्खा याममा पिकमा सबैधन्दा धेरै ५ सय १३ मेगावाटसम्म आयात भएको थियो ।
‘काली गण्डकी, मस्र्याङ्दी, मध्यमस्र्याङ्दीलगायत प्राधिकरणका सबै विद्युतगृह पूर्ण क्षमतामा चलेका छन्,’ उनले मंगलबार ऊर्जा खबरसँग भने,‘निजी क्षेत्रको उत्पादन पनि बढेकाले विद्युत आयात घटेको छ ।’
सोमबारको माग र आपूर्तिको तथ्याङ्क अनुसार प्रणालीमा आवद्ध १ हजार १ सय ८८ मेगावाटमध्ये प्राधिकरणका विद्युतगृहको उत्पादन बढेर ४ सय १ मेगावाट पुगेको छ । निजी क्षेत्रले पनि ३ सय ४४ मेगावाट उत्पादन गरिरहेका छन् । पिकमा ४ सय २८ मेगावाटसम्म आयात भएको छ । अन्य समयको आयात घटेको छ ।
समय समयमा बर्षा र हावाहुरीका कारण वितरण प्रणाली आवरुद्ध हुँदा खपत नभएको विद्युत भारततर्फ निर्यात हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।